राजेन्द्र महतोले भन्नुभयो, ‘फोरमसँग एकता हुनको लागि उपेन्द्र यादव सडकमा आउनुपर्छ’ | सहारा टाइम्स
Home » madhesh » राजेन्द्र महतोले भन्नुभयो, ‘फोरमसँग एकता हुनको लागि उपेन्द्र यादव सडकमा आउनुपर्छ’
राजेन्द्र महतोले भन्नुभयो, ‘फोरमसँग एकता हुनको लागि उपेन्द्र यादव सडकमा आउनुपर्छ’
काठमाडौं, साउन १४ गते । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारसँग संविधान संशोधन हुनेबारे आफूहरुको पूर्ण विश्वास र भरोसा रहेकोले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्नु हुँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारलाई दिएको समर्थन अहिले फिर्ता हुँदैन । फिर्ता लिनेबारे हाम्रो पार्टीले अहिलेसम्म कुनै योजना बनाएको छैन । यो सरकार दुई तिहाईको हो । संविधान संशोधनको लागि सरकारले पहल गर्नेमा हामी आशावादी छौं । हामी अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं ।’
‘हामी सरकारको रवैया र व्यवहार हेरेर अघि बढ्छौं । सरकार जसरी अघि बढ्छ, हामी पनि त्यसैगरि अगाढि बढ्छौं । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा नलिने भन्नेबारे समय आएपछि योजना बन्ला । तर अहिले हाम्रो कुनै योजना छैन ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
महतोले आफ्नो पार्टी अहिले सरकारमा सहभागी हुने कुनै सम्भावना नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी सरकारमा जाने कुनै सम्भावना छैन ।’ सरकारले संविधान संशोधन गर्छ भन्नेमा आफूहरु पूर्ण रुपमा आशावादी भएकोले यदि संशोधन नगरे त्यसपछि आफूहरुले दबाई गर्न जानेको उनले बताए । महतोले थप्नुभयो, ‘अहिले नै दबाई गर्ने बेला भएको छैन् ।’
पार्टीको महाधिवेशनबाट सहमतिमै नेतृत्व चयन गरिनेपनि उनले विश्वास दिलाए । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी सहमतिमै महाधिवेशन सम्पन्न र्छौं । पार्टीको नेतृत्व र संगठनात्मक संरचनापनि सहमतिमै टुँगो लगाउँछौं ।’
उहाँले भन्नुभयोे, ‘पार्टीको नेतृत्व हामी सहमतिमै टुँगो लगाउँछौं ।
कुनै प्रतिष्पर्धा हुँदैन । अध्यक्ष मण्डल रहने वा नरहने भन्ने कुरापनि हामी सहमतिबाटै टुँगो लगाउँछौं । पार्टीको निर्णय सामूहिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउँछौं ।’
वर्तमान सरकारले काम नगरेकोमा आफूहरुको असन्तुष्ट रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारसँग दुई तिहाई छ । हामी हाम्रो माग र सवालहरु पूरा गराउनको लागि दबाब दिईरहन्छौं । भर्खरैमात्रै पनि हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई रिमाईण्डर गराएका छौं । मुलुकको समस्या समाधान गर्नुहोस् । दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी जनताको सवालहरु संविधान संशोधनमार्फत हल गर्नुहोस् भनेर दबाब दिएका छौं । अहिलेसम्म संविधानको पालना भएको छैन । जनताले नागरिकता पाएका छैनन् । जन्मसिद्ध नागरिकले पनि नागरिकता पाएका छैनन् ।’
मधेश आन्दोलन ताका नेता तथा कार्यकर्तालाई लगाईएको झुठा मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहाई गर्नपनि आफूहरुले दबाब दिएको उहाँले सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘१५÷२० हजार मान्छे मार्नेहरु प्रधानमन्त्री भैसके । उनीहरुलाई रेड कार्पेट ओछ्याईसके । यही हो लोकतन्त्र ? रेशम चौधरीलाई अहिलेसम्म सांसदको प्रमाणपत्र बुझ्ने वातावरण बनाईएन ? सरकारको भनाई र गराईमा एकरुपता हुनुपर्छ । भन्ने एउटा अनि गर्ने अर्को गर्नुभएन ।’
सरकारलाई दिएको रिमाईण्डरपनि कुनै सुनुवाई नभए आफूहरु कडाईका साथ अल्टिमेट दिएर अघि बढ्ने उहाँको चेतावनी थियो ।
नेता महतोले नेपालले दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्रसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो, ‘हामीले भारत र चीन दुवै छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्छ । दुवै छिमेकीसँग हाम्रो नङ र मासुजस्तो सम्बन्ध छ । हामीले दुवैसँग अति विश्वसनीय सम्बन्ध राख्नुपर्छ । दुईवटै छिमेकीसँग निकटतम् सम्बन्ध राख्नुपर्छ ।’
काठमाडौंमा भारत र चीन कुन देशबाट पहिले रेल आउँछ त भनेर पत्रकार धमलाले सोधेको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, ‘कुन रेल आउँछ, के–के आउँछ, रेल, जहाज, कहिले आउँछ भन्ने कुरा सरकारलाई सोध्नुहोस । जहिले आउँछ, आउँछ । जनताले हेरिरहेका छन्, विकास हुनु राम्रो कुरा हो ।’
राजपा र फोरमबीचको एकताको पनि अहिले कुनै सम्भावना नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘उपेन्द्र यादवजी सरकारमा हुनुहुन्छ, हामी सडकमा छौं । अनि कसरी एकता हुन्छ ? त्यसैले अहिले एकता सम्भव छैन । एकताको लागि त उपेन्द्रजी हामी बसेको ठाउँमा आए हुन्छ ।’
उहाँले प्रदेश नम्बर २ को सरकारमा राजपा र फोरमको गठबन्धन भने कायमै रहने विश्वास दिलाउँदै भन्नुभयो, ‘प्रदेश २ मा ५ वर्षमात्रै होईन, १० वर्षसम्म गठबन्धन कायम रहन्छ ।’
त्यस्तै उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँगको आफ्नो पार्टीको सम्बन्धपनि गुण र दोषको आधारमा कायम रहने जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सबै एजेण्डामा सहमति हुँदैन, एजेण्डाका आधारमा हाम्रो उहाँहरुसँग सम्बन्ध कायम रहन्छ ।’